Ho fanajana ny hamehana ara-pahasalamana dia natao tamin’ ny alalan’ny "viseoconference" ny filan-kevitry ny Minisitra izay notarihin’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina sy ny Praiminisitra Ntsay Christian, tamin’ny sabotsy 4 Jolay sy omaly 05 Jolay. 8 juillet 2020
Nifandimby niakatra tao amin’ny haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM kosa ireo Minisitra tompon’ andraikitra maromaro taorian’ izay nilaza ny mety ho tohin’ny fihibohana sy ny fepetra horaisina mifanaraka amin’izany.
Noho ny fiparitahan’ny valanaretina sy noho ny fitombon’ny isan’ny olona mitondra ny tsimokaretina dia nohamafisina nandritra ny fanambaràn’ireo Minisitra, omaly, fa miverina mihiboka tanteraka ny Faritra Analamanga. Mikatona manomboka ny alatsinainy izao ka hatramin’ny alatsinainy 20 Jolay 2020 ary tsy azo ivezivezena na mivoaka na miditra ato anatin’ny Faritra Analamanga. Misokatra mandritra ny tontolon’ny andro ihany anefa ny fivarotam-panafody rehetra. Misokatra ireo toerana fivarotana ny zavatra ilaina andavanandro, ka olona iray ihany isan-tokantrano no mahazo mivoaka amin’ny 06 ora maraina ka hatramin’ny 12 ora maraina ihany.